5 SaaS Successga nke Ọma Ndị Ahịa Kachasị Mma | Martech Zone
Oge agafeela mgbe ndị otu ahịa na-azụ ahịa na-ejighị oku na ndị ahịa na-akparaghị ókè rụọ ọrụ. Maka na ugbu a bụ oge iji belata obere ma nata karịa n'ihe gbasara mmeri ndị ahịa. Niile ị chọrọ bụ ụfọdụ smart azum, na ikekwe ụfọdụ enyemaka si a SaaS mmepe ngwa ụlọ ọrụ.
Mana, ọbụlagodi tupu nke ahụ, ihe niile na-agbadata ịmara ezigbo omume maka ọganiihu ndị ahịa. Mana nke mbu, o doro gi anya na imara okwu a. Ka ahụ.
Kedu ihe bụ ihe ịga nke ọma, gịnịkwa kpatara o ji dị mkpa?
N’ikwu okwu dị mfe, mgbe ihe onye ahịa chọrọ dabaghị na ihe ngwa ahịa gị na-enye, enwere ọghọm ịga nke ọma. Oghere a dị n'ime obere nkwukọrịta okwu, nke ọtụtụ azụmaahịa enweghị ike mejupụta. Oghere a dị mkpa n'ihi na ọ ga-egbochi gị scalability na ahịa, njigide, cross-n'ire, elu-ere, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nke a bụ omume ise kachasị dị mkpa ị ga-amaba iji banye n'elu atụmatụ egwuregwu nke ndị ahịa. Nwere anya!
Omume Kacha Mma #1: Gosiputa Obi ekele, Buru nzaghachi, Wulite Mmekọrịta
Otu n'ime ụzọ kachasị mma iji nweta ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa bụ ịkwụsị ịkwụsị ekele gị. Maka nke a, 'daalụ' bụ mantra bara uru na-abụ abụ.
Ebumnuche nke omume a dabere n'eziokwu na onye ahịa gị họọrọ gị n'etiti asọmpi gị niile. Ya mere, inwe ekele bụ nkwenye nye onye ahịa na ha chọrọ nke kacha mma. E wezụga nke ahụ, ịnwere ike itinye nke a n'ọtụtụ ọkwa nke ọrụ na usoro gị. Dịka ọmụmaatụ, mgbe onye ahịa mbụ batara, họrọ maka ikpe ikpe n'efu, megharịa atụmatụ, ma ọ bụ hapụ nzaghachi.
Ebe ọ bụ na anyị kwuru nzaghachi, nke ahụ bụ igbe ọzọ dị mkpa ịlele. Gbaa ndị ahịa gị ume ịza nzaghachi na ọkwa niile, ọ ga-aka mma ọkacha mma. Mgbe ị na-ege onye ahịa ntị na-aga ogologo oge iji hụ na afọ ojuju ndị ahịa, ọ dị ntakịrị karịa nke ahụ. Ọ bụrụ n'iji nzaghachi eme ihe n'ụzọ ziri ezi, ha nwere ike inyere gị aka ịchọpụta oghere afọ ojuju.
Maka nke a, gbaa mbọ hụ na nzaghachi ahụ ruru ndị otu ngwaahịa. Ma ọ bụrụ na ị nwere ike ime ka nke a mee na ezigbo oge ọbụla ka mma. A hụla ya mgbe ndị ahịa nwere ike iso ndị otu ngwaahịa na-emekọrịta ihe, ma ọ bụ ndị nyocha, ha nwere ntụkwasị obi karịa.
I nwekwara ike ime ka nke a bụrụ ohere ị nweta ma wulite mmekọrịta gị na ndị ahịa. Ọ bụ ezie na ndị ahịa gị baara gị uru nke ukwuu, ị ga-emerịrị ka ha mara otu ihe.
Omume Kacha Mma #2: Mee ọtụtụ oge mmegharị, aka Oge Golden
Dị ka mmetụta mbụ bụ mmetụta ikpeazụ, oge mmeghe maka ngwaahịa ọ bụla bụ ihe dị egwu nke ohere ọlaedo. Ọ bụ oge onye ahịa na-eji ịnụ ọkụ n'obi agba mbọ ịnwale ihe ọhụrụ na ohere ọhụụ. Ya mere iji mee ka ọ bụrụ ihe ịga nke ọma, kpalie mkparịta ụka na-aga n'ihu site na mmalite.
Chepụta ọtụtụ ihe mmegharị dị iche iche nke ndị ahịa na-enwe mkpali ịgbaso. E wezụga nke ahụ, mee ka ha dị ka pipeline nke ihe ndị yiri ka ọ ga-enweta ngwa ngwa maka onye ahịa. N'elu, ihe omume ndị a ga-abụrịrị ọnụ ọgụgụ maka gị yana afọ ojuju ndị ahịa.
Agbanyeghị, nke a bụkwa oge mgbe ị ga-enwerịrị ike ịnapụta ọrụ gị kacha mma. Ma ọ bụ oge kachasị mma iji jide ndị ahịa nwayọ nwayọ ma ọ bụ ndị na-enweghị ike iru akara ngosi ha. Ma obu aka gi Ngwa SaaS ma ọ bụ jikọọ na ụlọ ọrụ SaaS, mana ekwela ka oge a pụọ.
Ka anyi dobe ihe ọla edo! Omume gị na oge ọla edo a na-emetụta ụzọ ndị njem ndị ahịa ga-aga n'ihu. Echefukwala inye ihe kachasị mma!
Omume Kasị Mma # 3: Lekwasị anya na mkpa onye ọrụ karịa ire ere
Ozugbo azụmahịa zuru ezu na SaaS ahịa n'ụgbọ, ha na-ebido n’ịkụziri ndị ahịa ha ihe gbasara atụmatụ ha niile. Ma cheta klas nke mgbakọ na mwepụ gị n'ụlọ akwụkwọ? I nwere ike ịnọ na-eche mgbe algebra ma ọ bụ trigonometry ga-abịa zọpụta gị na ndụ n'ezie.
Ọ bụ otu ihe ahụ maka ndị ahịa gị mgbe ị na-egwupu ha na atụmatụ niile nke ngwaahịa gị. Jiri ya nwayọọ! Mgbe ị na-agbaso usoro abụọ a dị n'elu, ị ga-ahụ ihe doro anya nke ihe onye ahịa gị chọrọ. Ma ọ bụghị oge ego? Yabụ kedu ihe ị ga-eji oge gị na onye ahịa gị mebie na atụmatụ ha nwere ike ọ gaghị achọ, ma ọ bụ opekata mpe n'oge ahụ?
Wepụta oge na ihe ndị ahịa gị chọrọ wee nye azịza ya. E wezụga nke ahụ, ị ​​ga-enwerịrị ntị maka nsogbu ndị ahịa. Nke mbu, gee nti, juo ajuju ndi kwesiri, wee kwue otu ihe ahia gi si egbo nsogbu ha. N'otu aka ahụ, ị ​​nwekwara ike ilekwasị anya n'inye ndị ahịa ọzụzụ dị mma karịa usoro mmụta ogologo na-agwụ ike.
Omume Kacha Mma # 4: Chee echiche B2B dị ka H2H maka njigide ka mma
Otutu ulo oru jiri oge na ike buru uzo agha. Mana ha mehiere nke i -omi ha na ndi ozo ndi ozo. Dị ka ndị ọrịa abụọ nwere ike ịchọ ọgwụgwọ dị iche iche, ọbụlagodi otu ọrịa ahụ, otu ihe ahụ bụ nsogbu ndị ahịa gị.
Ga-aghọta na a ga-emeso B2B dịka H2H. Were ya na ọ bụ mmadụ ka ọ bụrụ mmadụ ma ọ bụ obi na obi, dịka i chere na ọ dabara, mana zie ozi ahụ.
Soro ndi otu ndi otu kesaa ihe omuma nke ndi ahia ma nyere ha aka imata ihe na aru oru. Nke nta nke nta, ị ga-azụ ha ka ha mee mkpebi ad hoc ka ha wee nwee ike ịnyefe azịza ndị eji eme akwa. Ọ na-enyere aka iwulite a SaaS ahịa atụmatụ mma ma dị irè.
Ka ị na-ele gị ahịa ndị ahịa dị ka ụmụ mmadụ ma ọ bụghị ụlọ ọrụ, ka ị ga - eme ka njigide ha dịkwuo mma. Ndị Ahịa Na-aga nke Ọma Ahịa nke na-anabata iwu a na-eme ka njigide ndị ahịa na-aga were were.
Omume Kacha Mma # 5: Akpaghị aka SaaS Usoro Ndị Ahịa maka mmeri ngwa ngwa
Ndị njikwa ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa nwere ibu ọrụ dị iche iche, site na ịhazi usoro iji nyochaa onye ahịa ọ bụla. Ọ bụ ezie na ha ga-enyocha ọtụtụ nkà ha, ọrụ ndị ahụ nwere ike ịghọ ibu na oge adịghị anya. Nke a ga - eji nwayọọ nwayọọ metụta usoro ihe ịga nke ọma ndị ahịa gị.
Yabụ, jiri ngwanrọ maka njikwa ọrụ n'ihi na akpaghị aka gị Filiks maka ngwa ngwa Enwee Mmeri na mpaghara nke ahịa ịga nke ọma. Akpaaka ga-enye gị ohere maka ịmezi usoro gị ma lekwasị anya na ihe ndị ọzọ dị ka ahịa na mgbasawanye.
E wezụga nke ahụ, ọ ga - enyere gị aka belata backlog ma kechie oge mkpebi gị. Site na ntinye mgbasa ozi dị mfe ma na-emezu, ị ga-enwe ike ịbịakwute ndị ahịa niile, n'oge. Ọzọkwa, ị ga-enweta oge iji nyochaa ma melite usoro maka atụmanya uto ka mma.
Nsonaazụ ga-aba ya!
Yabụ nke a bụ etu ahịa SaaS si nwee ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa nwere ike ịbara uru azụmaahịa gị ogologo oge. Ọ bụ ngwaahịa na-emetụta ngwaahịa nke nwere ike iweta ndị ahịa na njikwa azụmaahịa gị n'otu ebe. Ọ bụ kensinammuo na scalable n'elu ikpo okwu nke ga - enyere gị aka ịbawanye njide ndị ahịa iji gbasaa okwu ọnụ ahụ dị ụtọ, anyị niile na - achọsi ike.
Tags: bonobob2bahịa n'ụgbọahịa ihe ịga nke ọmaịnyịnyasaassoftware dị ka ọrụọdịiche ịga nke ọma